Kutheni ndifanele Wothenga inkampani Huamachinery?
Ngenxa yokuba sele ngaphezu nje mveliso. Injongo yethu kukuba ukuqinisekisa ukuba zonke umxumi lanelisekile ngokuthenga lwabo namava zokuthenga 100%. Ukuba awanelisekanga ngokupheleleyo, siya lokuphendula ezikuxhalabisayo ngoko nangoko.
Kuthekani ukuba kukho ingxaki into yam?
Thina waranti konyaka omnye, Free replacement iindawo ngenxa ingxaki umgangatho Kwakhona ukuba Siyavuya ukwamkela imbuyekezo izinto zikwimeko entsha. Isiqinisekiso sethu sisebenza kuphela ukuba umthengi wokuqala umatshini.
Emva kokuba ugqibe ukuba uthenge, siya kukuthumelela proforma invoyisi iinkcukacha zebhanki yethu, ndiyizisela le PI ebhankini, uze ucele ukuba wenze T / T ukuba idiphozithi. Kuba iseti enye, umatshini wakho ziziswe zingadlulanga iintsuku ezi-5 emva kokuba abafumana idipozithi, siya kuthumela kwizibuko kwaye nokukunikela kuni ngolwandle.
ityala -ukuze ukuba iintlawulo yokuphatha ngakumbi, ungadlulisela 100% yentlawulo, siya hlengisa iimveliso kunye nokuthunyelwa phantsi isibonelelo sakho
-Ukuba nangoku ongayiqondiyo, nceda musa hestitate ukubuza kum
Ngaba I-odola 1 iseti ye isampula?
eyamkelekileyo Yes.Sample, Wena ungavavanya umgangatho sample.